Manje sekuthengiswa "Wonke lowo mlilo", okwakamuva okuvela ku-Ángeles Caso | Izincwadi Zamanje
Manje kuyathengiswa «Wonke lowo mlilo», okwakamuva okuvela e-Ángeles Caso
Namuhla inoveli yokugcina yomklomelo wemiklomelo eminingi iyaqhubeka nokuthengiswa Icala lase-Angeles kusukela esandleni sika I-Planeta yokuhlela. Inoveli, enesihloko Wonke lowo mlilo, ilandisa ngendaba yababhali besifazane abathathu abanesibindi emhlabeni wamadoda abelana ngothando oluyimfihlo.
Kusethwe ngekhulu le-XNUMX, Wonke lowo mlilo Ngena ezimpilweni zabesifazane abathathu abanethalente elimangalisayo abakwazile ukuvukela izinkambiso ezinonya zomphakathi wamaVictoria futhi baba ngababhali abakhulu emhlabeni obekelwe abesilisa.
Amazwibela athi "Wonke lowo mlilo"
NgoJulayi 16, 1846. Enduneni yaseHaworth, amadodakazi amathathu omfundisi aqala usuku ngokunakekela imisebenzi yasendlini ngenkathi elinde ukuhlwa okuzayo, lapho bezinikele khona ekubhaleni amanoveli abafisa ukuwashicilela. Bangodade baseBrontë, abesifazane abathathu abathi, ngenxa yezincwadi, basinda ezinhlekeleleni zomndeni kusukela ebuntwaneni.
UCharlotte uyabhala UJane Eyre, Emily Ukuphakama kwe-Wuthering kanye no-Anne Agnes Mpunga. uphawuethandaza ikusasa elingejwayelekile elilindele imisebenzi yabo yezincwadi, laba abathathu bathululela kubo amaphupho abo, ukukhathazeka kwabo nezinkanuko zabo ezifihliwe, baphendulela leyo ndlu emnyama ibe yisikhala esigcwele ukukhanya.
Mayelana ne-Angeles Case
U-lesngeles Caso wazalelwa eGijón ngo-1959. Umsebenzi wakhe wokubhala ubandakanya amanoveli, izindaba ezimfishane, ama-eseyi, ama-biographies, izincwadi zezingane, ukuhumusha kanye nemibhalo yamafilimu. Ungumbhali wephephandaba nakwabezindaba abahlukahlukene. Imisebenzi yakhe ihunyushwa ngezilimi eziyishumi nanhlanu. Amanoveli akhe afaka phakathi U-Elisabeth wase-Austria-Hungary noma inganekwane eqalekisiwe, Isisindo samathunzi (Umklomelo wokugcina we-Planeta Award ka-1994), Ukuthula isikhathi eside (Umklomelo kaFernando Lara 2000) futhi Lapho kuphakama izihlalo zobukhosi Inoveli yakhe Ngokumelene nomoya yazuza umklomelo wePlaneta Prize 2009, uMklomelo weNoveli Engcono Kakhulu Yangaphandle eChina 2011 kanye neGiuseppe Acerbi Prize 2012 e-Italy.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Manje kuyathengiswa «Wonke lowo mlilo», okwakamuva okuvela e-Ángeles Caso